Momba anay | Galeriana ROYI ART
Ny galeriana ROYI ART no fivarotana tokana ho an'ireo tia zavakanto an-tserasera mitady ny sary hosodoko tonga lafatra amin'ny vidiny mora.
Alizee lehiben'ny loham-pianakaviana dia mitarika ny galeriin'ny varotra ROYI ART any ivelany any ivelany izy, izy koa dia Art Art. Tao anatin'ny 10 taona lasa izay, i Alizee dia niara-niasa akaiky tamin'ny mpamorona anatiny, mpanao maritrano, mpandrafitra, mpamory zavakanto sns… arakaraka ny hiarahantsika miasa amin'izy ireo, vao mahatsapa isika fa afaka manao tsara kokoa ho azy ireo. Ny tena zava-dehibe indrindra, ny ankamaroan'ny mpanakanto dia manan-talenta amin'ny lohahevitra na teknika sasany, mamorona sy mamolavola isika, mandoko tsara ny tsanganasa kanto tsirairay. Manitatra ny raharaham-barotra amin'ny alalan'ny Reputation isika.
100% SORATRA TANANA
Ny sary hosodoko tsirairay ao Royi Art dia hosoratana tànana amin'ny kanvas matihanina.
Miaraka amin'i Royi Art ianao dia mividy mivantana amin'ny studio, ny mpamorona, ny mpanaingo ary ny mpanakanto.
Nahavory ny sary hoso-doko an-tapitrisany eran-tany izahay, miainga amin'ny Masterpieces eoropeana ka hatramin'ny zavakanto ankehitriny.
Tena menaka, Broshes tena izy, tena mpanakanto, zavakanto tena izy.
Ny mpanjifa sasany dia nanontany ny fomba itovizany amin'ny sombin-tsipika aseho an-tserasera sy sombin-tsarimihetsika.
Te hilazana aho fa tsy afaka mampanantena izahay fa hahazo IDENTALY araka ny hitanao ao amin'ny tranokalanay satria ny sary hosodoko ihany no afaka manao AZY mitovy amin'ny tany am-boalohany.
Ny hoso-doko rehetra dia nolavina tànana ka mety ho hafa daholo ny fitokonan'ny borosy rehetra. Mampanantena izahay fa hahazo izany amin'ny kalitao sy ny hatsarany.
TANTARAN'ORA / SORATRA ACRYLIKA / CANVAS
Mirehareha amin'ny tenanay izahay fa tsy manome afa-tsy ny zavakanto ambony indrindra.
Ny hosodoko rehetra noforonin'ireo mpanakanto dia hosodoko tànana amin'ny fampiasana ny fitaovana tsara indrindra misy. Izany dia miantoka ny halavan'ny lavany sy ny fikajiana hatsaran'ny sary hosodoko.
Nisafidy ny fampiasana ny loko loko menaka Blockx Artist Oil ny mpanakanto. Ny taranaka simia dimy tao amin'ny fianakaviana Blockx dia niasa nanomboka tamin'ny taona 1865 mba hanatsarana ny loko mena.
Ny loko acrylic dia loko vita amin'ny haingam-pandeha haingana izay misy ny fampiatoana ny pigment ao amin'ny emulsion polymer acrylice. Tondraka ny rano fa manjary tsy manjary rano rehefa maina. Miankina amin'ny habetsaky ny loko ny rano, na novaina amin'ny gela akrika, haino aman-jery, na ny pastes, ny sary hosodoko vita vita dia mety ho toy ny lozomina na hoso-doko hoso-doko, na manana toetra mampiavaka azy manokana tsy ho tratran'ny fampitam-baovao hafa.
PACKING / ROLL ANY TUBE / FRAMED
Ny kalitaon'ny fandefasanao no laharam-pahamehana ary ny fitaovana ampiasainay handefasana ny vokatra azontsika dia taratry ny fanoloran-tenantsika.
Matokia fa raha toa ka misy vokatra mifangaro ny baikonao, alefa misaraka amin'ny fonosana mety izy ireo, ary tsy handoa fandefasana fanampiny ianao.
Hoditra miaraka amina karazan-jiro isan-karazany, ny rakotra sary tsy misy rindran-damina, rakotra takelaka fiarovana sy sarimihetsika, ary avy eo nohodinina tamim-pitandremana ho fantsona maharitra.
Voaroaka ny hosodoko vita anaty baoritra misy baoritra mibontsina ary zoro efatra dia harovana tsara raha misy loza fitaterana.
Ekipa manokan-tena hiatrehana ny zavatra ilainao
Fifampidinihana momba ny zavakanto maimaim-poana sy ny fomba ofisialy.
Famerenana haingana haingana, dia nalefa eran-tany.
100% fiantohana fahafaham-po.
Manolotra fenitra mahazatra avo lenta amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay.
Mino izahay fa ny fangatahana rehetra ataon'ny mpanjifa dia fahafahana hanorina fifandraisana lehibe.
Tongasoa eto ny hevitra sy ny valin-kevitra vaovao, ary amboary ny serivisy ataonay mihoatra ny fangatahan'ny mpanjifa.
Oil Painting , diloilo hanao hoso-doko amin'ny lamba , Contemporary Oil Painting , filanjana-ponja , -tanana solika hanao hoso-doko , Abstract solika hanao hoso-doko , ny rehetra Products